ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်ပို့စ်တွင်ကျွန်တော် crank ကိစ္စတွင်အင်ဂျင်ကရေနံကိုဖုံးအုပျ, ဘယ်လိုစစျဆေးဖို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြည့်ရှုပါရန်. ဒီ post မှာတော့ကျနော်တို့ဂီယာအရည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဘို့ကြည့်ဖို့စစ်ဆေးနေကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်.
အင်ဂျင်ကရေနံဘေးတွင်, ဂီယာရေနံဖြစ်ကောင်းလာမည့်အရေးအပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်အရည်. automatic transmission သူတို့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်စနစ်တကျဂီယာပြောင်းကုန်ပြီရှိသည်ဖို့အတှကျနိုင်ရန်အတွက်သင့်လျော်သောအဆင့်တွင်ရှိသည်နှင့်အသက်တာရှည်သေချာစေရန်ဘို့ကအရေးကွီး၏.
ငါတို့ပြုပထမဦးဆုံးအရာရှေ့ဆက်သွားနှင့်ဂီယာ၏အရည်အဆင့်ကိုစစျဆေးဖြစ်ပါတယ်. ထိုကျဆင်းလာချောင်းကို Locate နှင့်မော်တော်ယာဉ်ပွေးမပါဘဲထဲကဆွဲထုတ်. တစ်ခါတစ်ရံအရည်စစျဆေးဖို့ဘယ်လောက်ပေါ်တွင်ကျဆင်းလာချောင်းကိုအပေါ်ညွှန်ကြားချက်များရှိပါသည်. သငျသညျရရှိနိုင်တဦးတည်းရှိပါကလည်းပိုင်ရှင်တွေကို manual ထဲမှာကြည့်ရှု, ညွှန်ကြားချက်အရည်အောက်မှာရှိတဲ့ရပါမည်. အများစုဟာထုတ်လုပ်သူယာဉ်ပူနွေးဖြစ်သင့်ကြောင်းညွှန်ပြ, အင်ဂျင်ကပွေးနှင့်ကြားနေအတွက်. ထို dipstick ချွတ် Wipe ကြောင့် Re-ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တဖန်ဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်အရည်အကြံပြုထားတဲ့ကန့်သတ်ထားသည်စစျဆေး. ထို့ပြင်အရည်အနံ့, ထိုသို့မီးရှို့ရာယဇ်တို့ကိုအနံ့ရှိမနေသင့်. အများစုဟာ transmission ကိုလုံးဝအနက်ရောင်ဖြစ်လည်းသူတို့ကိုအနီရောင်တင့ရှိသည်နှင့်မဖြစ်သင့် (ဤအမိုင်အကွာအဝေးယာဉ်ပေါ်ဘယ်လောက်မြင့်မြင့်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်).
အချို့သောအသစ်များကိုမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူ, ထိုဂီယာလုံးဝအလုံပိတ်ယူနစ်, သင်ထည့်မဟုတ်သလိုပင်အရည်စစ်ဆေးမခံနိုင်သောအဓိပ်ပာယျ. သငျသညျရောနှောစစျဆေးနိုငျသောထိုမော်တော်ယာဉ်နှင့်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူ, အကြှနျုပျတို့သညျရှေ့ဆက်သွားနှင့်မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်. ယာဉ်ချမ်းအေးလိုလျှင်, သင်ကားမောင်းနေစဉ်, ယာဉ်ဟာချောချောမွေ့မွေ့ပြောင်းလဲလျှင်သတိထားမိမှာ. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနည်းလမ်းနှစ်ခုလုပ်ဖို့ကြိုက်. တဦးတည်း, ပြီးပြည့်စုံရပ်တန့်ကနေ, ညင်ညင်သာသာပုံမှန်မောင်းနှင်မှုအခြေအနေများနှင့်အတူအဖြစ်ပိုပြီးအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကမျး. ဒုတိယအချက်မှာ, ပြီးပြည့်စုံရပ်တန့်ကနေခက်ခဲများနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်ချွတ်ယူပြီး. ဤနည်းအားစမ်းသပ်သည့်အခါ rpms ယေဘုယျအားဖြင့်အင်ဂျင်ဆိုင်း်ရှေ့တော်၌အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသွားလိမ့်မည်. သင်ကားတစ်စီးထဲတွင်မော်တော်ယာဉ်၏ပိုင်ရှင်ရှိပါကသင်သည်သူတို့နှလုံးရောဂါရှိသည်နှင့်သင်သည်သူတို့၏ကားကိုတက်ကိုက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ထင်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုလက်ရှေ့၌သင်တို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်နိုင်ပါသည်. တစ်ဂီယာချမ်းအေးသောအခါသူကချောချောမွေ့မွေ့ shift တက်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်နှင့်မမည်သည့်အခါတဦးတည်းအချိန်ဖြစ်ပါသည်. ထို rpms လျှင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး (တစ်မိနစ်လျှင်အင်ဂျင်ကတော်လှန်ရေး) မြင့်မားတဲ့ running နေကြတယ်နှင့်အင်ဂျင်ဂီယာဆိုင်း်ရှေ့တော်၌ခဲယဉ်းလုပ်ဆောင်နေသည်. ထို့ပြင်မော်တော်ယာဉ်အကောင်းနဲ့ပူနွေးသောအခါ, ယာဉ်ပြောင်းလဲမည်သို့နောက်တဖန်အသိပေးစာယူ.
မှန်မှန်အင်ဂျင်ရေနံပြောင်းလဲနေတဲ့နဲ့တူပြုသောအမှုအဖြစ်ထုတ်လွှင့်အရည်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပွုသောအရာတစ်ခုခုမဖြစ်. သို့သော်, ထိုသို့ထုတ်လုပ်သူများအကြံပြုချက်များအရသိရသည်ပြောင်းလဲသွားရပါမည်. ဤအချက်အလက်သည်ပိုင်ရှင်တွေကို manual ထဲမှာစာရင်းသွင်းထားရမည်, နှင့်မျှော်လင့်ရောင်းသူတဦးတည်းရှိတယ်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝပြွန်ကြောင့်ထွက်ယူပြီးအားဖြင့်ထုတ်လွှင့်အရည်ကိုပြောင်းလဲသောစနစ်များကြီးမားတဲ့ပရိသတ်များမဟုတ်. တချို့ကရေနံပြောင်းလဲမှုသောအရပ်တို့ကိုမဤသို့ပြု, နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ရှိပါတယ်တဲ့အခါဒီဘယ်မှာပြီးစီးမြင်ကြပြီ 100,000 ပေါ်မိုင်ပေါင်းကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးပြုတော်မူပြီ. ဤရွေ့ကား, မော်တော်ယာဉ်ပြုသောအမှုရှိခြင်းပြီးနောက်စနစ်တကျ shift မည်မဟုတ်. သူတို့ကဂီယာဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပုံခဲ့ဘယ်မှာပြီဆိုပါကပိုင်ရှင်အစဉ်အမြဲမေးပါ. အရည်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ဂီယာဒယ်အိုး drop နှင့် filter ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ခံရဖို့ပါလျှင်ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင်တို့၌အစဉ်သငျသညျ purchasing ရှေ့တော်၌တစ်ဦးကိုတစ်ကြိမ်အပ်ရန်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းစက်ပြင်ဆရာမှ purchasing စဉ်းစားနေပါတယ်တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ယူချင်. သင်သည်လည်းတစ်ဦးရသင့် မော်တော်ယာဉ်အခွအေနေအစီရင်ခံစာ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံကနေရရှိနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းများရှိပါတယ်လျှင်ကြည့်ဖို့. မော်တော်ယာဉ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံမှာဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိကြသောအခါများသောအားဖြင့်အဓိကမော်တော်ယာဉ်အခွအေနေအစီရင်ခံစာကုမ္ပဏီများအဖို့ကသတင်းပို့ခြင်းနှင့်မော်တော်ယာဉ်ပြုသည်အားလုံးတှငျမှတျတမျးတငျထားန်ဆောင်မှုများစံချိန်တင်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်.
ဒီ post ပိုင်ရှင်တဦးတည်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးကြောင့်စာဖတ်သူများရဲ့များ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အကျိုးအတွက်ကြောင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်. ကျနော်တို့ဒီ post ကိုရေးသားဘို့ဤ site ပေါ်တွင်အခြားအတွဲဖက်ကနေမဆိုလျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိကြပြီမဟုတ်.